Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Soeda » Suède: mety hilaina ny manidy ny ampahany amin'ny fiarahamonina
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Soeda • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny fahasalamana any Suède Lena Hallengren
Ny 'maodely soedoà', dia niteraka fitsikerana na teto an-toerana na tany ivelany. Ny mpanjaka nanjaka tany Suède, ny Mpanjaka Carl XVI Gustaf, dia nilaza tamin'ny volana desambra fa tsy nahomby ilay tetika
Mampitandrina ny fameperana COVID-19 bebe kokoa ny governemanta Sweden
Mety hanidy ny trano fisakafoanana sy gym-ny i Suède
Sampan-draharaham-pahasalamana ho an'ny daholobe, mampitandrina ny amin'ny “isa betsaka indrindra” amin'ny tranga COVID-19 any Suède
Ny minisitry ny fahasalamana any Lena Hallengren dia nanambara fa “mety ilaina ny manidy ny ampahany amin'ny fiarahamonina soedoà,” ary nanampy fa misy “loza azo tsapain-tanana amin'ny onjampeo COVID-19.
“Misy onja coronavirus fahatelo any Eoropa. Mila mailo isika, ”hoy izy tamin'ny fampahalalana ho an'ny mpanao gazety vao haingana.
Ny governemanta ao amin'ny firenena, izay nisalasala teo aloha ny hametraka henjana Covid-19 faneriterena, ankehitriny dia manitatra be loatra ny hery fanidiana azy, satria i Sweden dia miomana amin'ny aretina hafa.
Tranga 19,600 19 mahery manerana ny firenena COVID-12 no voarakitra ao amin'ny tatitra isan-kerinandro farany, navoakan'ny governemanta soedoà tamin'ny XNUMX feb.
Efa manan-kery hanakatona ireo toeram-pivarotana lehibe ny governemanta. Ankehitriny ny tompon'andraikitra dia maniry ny hahafahana manidy ny mpivarotra rehetra, ny trano fisakafoanana, ny gym, ny salon de volo ary ny dobo filomanosana ary mametra ny asan'ny voly fialamboly, zoo, tranombakoka ary galeria. Araka ny drafitra, omena fahefana ny manam-pahefana eo an-toerana hametra ny hetsika atao amin'ny valan-javaboary sy trano fandroana.
Ireo tolo-kevitra rehetra ireo dia hatolotra ho an'ny consultations fanampiny amin'ny 26 febroary, hoy ny governemanta tao anatin'io fanambarana io. Mety hanan-kery amin'ny 11 martsa ireo lalàna vaovao, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Tsy toa ny firenena eropeana sy namana avaratra hafa, i Sweden dia tena tsy sahy nametraka fameperana henjana ny coronavirus, toy ny fanidiana ny firenena na ny sazy maska. Ny tompon'andraikitra dia niantehitra betsaka tamin'ny olona an-tsitrapo taorian'ny fanolorana torolàlana momba ny fahasalamana sy ny fitiliana ny fifandraisana.
Ilay politika, izay nanjary fantatra tamin'ny anarana hoe 'maodely soedoà', dia niteraka fitsikerana na teto an-toerana na tany ivelany. Ny mpanjaka nanjaka tany Suède, ny Mpanjaka Carl XVI Gustaf, dia nilaza tamin'ny volana desambra fa tsy nahomby ilay tetika.
Ny fitomboan'ny areti-mifindra dia nahatonga an'i Suède handray 'lalàna mamindra areti-mifindra' amin'ny volana Janoary 2021, izay mamela fepetra henjana kokoa. Nanamafy ny fanaraha-maso ny sisintany ny firenena tamin'ity volana ity, nitaky teratany vahiny mba hanao andrana Covid-19 ratsy rehefa tonga.
Maherin'ny 622,100 no olona voan'ny coronavirus tany Suède hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, ary efa ho 12,600 XNUMX no maty, raha ny angom-baovao avy amin'ny governemanta.